« All Africa Music Awards 2017 » : hisolotena an’i Madagasikara i Shyn | NewsMada
« All Africa Music Awards 2017 » : hisolotena an’i Madagasikara i Shyn
Anisan’ny fifaninanana sy sehatra lehibe ahafahan’ny kolontsaina aty Afrika mivelatra ny « All Africa Music Awards » na ny « Afrima 2017 ». Hanana solontena amin’ity andiany hotontosaina atsy Nizeria ity i Madagasikara.
Ny 10 novambra ka hatramin’ny 12 novambra izao, hotanterahina any Nizeria ny « All Africa Music Awards 2017 » na ny « Afrima 2017 ». Hisolo tena an’i Madagasikara amin’izany i Shyn, rehefa nahazo ny fanohanan’ny minisiteran’ny Fizahantany. Raha ny fandaharam-potoana nomeny, ny 10 novambra, hihaona amin’ireo mpanakanto manana ny maha izy azy sy ireo mpikirakira matihanina eo amin’ny sehatry ny mozika ity mpanakanto malagasy ity. Tanjona ao anatin’izany ny fidirana ao anatin’ny tambanjotran’ny mpanakanto eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Hisokatra kokoa ny fihaonana sy ny fifanakalozan-kevitra handraisany anjara ny 11 novambra. Fikaonandoha hiresahany ny tontolon’ny toekarena, ny fizahantany, indrindra fa ny momba ny kolontsaina aty Madagasikara. « Tombony lehibe ho antsika io mba hahafantaran’ny vahiny bebe kokoa an’i Madagasikara », hoy i Shyn.
Ny 12 novambra, lanonana lehibe hanolorana ny amboara ho an’ny mpanakanto eo amin’ny seha-javakanto isan-karazany, toy ny hira, sary, sns. Marihina fa ao anatin’ny sokajy « Révélation du continent africain » i Shyn. Dimy izy ireo no ao anatin’io sokajy io. Hizara roa miavaka tsara ny fanomezana isa. Ny 50%, avy any amin’ny mpitsara; ny antsasany kosa avy any amin’ny olona mpankafy. Mbola misokatra hatramin’ny 10 novambra rahateo ny fahazoan’ny olon-drehetra mifidy amin’ny alalan’ny pejin’ny « Afrima ».
Marihina fa ilay hira « Resim-pitia » nivoaka tamin’ny volana febroary teo no naha voafidy azy ho any amin’ny « Afrima 2017 ».